2.5 Nyefee Data ka iPhone 6s (Plus)
Na asịrị gbara ya gburugburu na ntọhapụ nke ndị ọhụrụ iPhone, ọtụtụ ndị na-achọ nanị mara ntọhapụ ụbọchị na ole ọ na-aga na-eri. Ntule hụrụ na anyị na-niile ma asian nke atụmatụ na ndị ọzọ na nkọwa na anyị nwere ike na-atụ anya na nke ọhụrụ iPhone. Na-esonụ a ole na ole ntapu na analysis nke asịrị site ọkachamara, anyị maara na ihe na-atụ anya na okwu nke atụmatụ.
Mgbe ọ bụla Apple tọhapụrụ a ọhụrụ ngwaahịa n'ime ahịa, ndị kasị chọọ mgbe ọmụma tidbit bụ ole ọ na-aga na-eri. Ga na atụmatụ ziri ezi na-eri? Iji zaa ajụjụ a dị anyị mkpa nke mbụ niile ịghọta otú mma ọhụrụ iPhone na-aga ịbụ na mgbe ahụ ahụ ma ọ bụrụ ọhụrụ atụmatụ ziri ezi na-eri. Rumo nwere ya na ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ anyị pụrụ ịtụ anya na ọhụrụ iPhone.
The iPhone 6s (Plus) na-atụ anya nwere ibu na ihuenyo ya mere ọ na-atụ anya na ndị ọhụrụ iPhone ga-eleghị anya weta mma ahụmahụ na okwu nke foto na vidiyo
Ọ bụ ezie na a na-adịghị enen, ọ bụ eleghị anya na iPhone ga-a 14 megapixel n'ihu panel igwefoto na ihe ọzọ 4 megapixel n'ihu igwefoto
The Quad-isi A9 processor ma ọ bụ ọbụna mma na-atụ anya ime ka iPhone ọzọ na-arụpụta
Ọ pụrụ abịa na a 128GB ebe nchekwa ahụ ga-abụ expandable ka 256GB ma ọ bụ karịa
Ọ na-atụ anya iji nye unhindered internet Njikọta na 4G ikike
All atụmatụ ndị a na-egwu na a nnukwu mma si aga iPhone ntọhapụ. Ma, olee otú ọtụtụ ị ga-adị njikere iji kwụọ ụgwọ maka ya.
The atụ anya price nke ọhụrụ iPhone 6s (Plus)
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ banyere ihe ọhụrụ iPhone, anyị na-yiri ka ọ bụghị mara kpọmkwem ihe price ruo mgbe ntọhapụ ụbọchị. Ozi Otú ọ dị surfaced nke tụrụ anya na ịnye ọnụahịa nke ọhụrụ iPhone n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ebe a bụ ihe ị pụrụ ịtụ anya na-akwụ ụgwọ mgbe ọ na-wepụtara.
Country iPhone Ahịa
USA N'etiti $ 649 na 849
India N'etiti 42,264inr na 55,295inr
Pakistan N'etiti 66.000 na 86,000pkr
UAE N'etiti $ 649 na 849
UK N'etiti £ 539 na £ 549
Japan N'etiti $ 649 na 849
China N'etiti 4000 yuan na 5500 yuan
Australia / td> N'etiti $ 870 na $ 1150
Germany N'etiti € 584 na € 764
France N'etiti € 584 na € 764
Ndị a ahịa ndị yiri ka na-emetụta a otutu ihe otú ha wee gaa elu ma ọ bụ ala dị ka ntọhapụ ụbọchị na-eru nso.
Ihe ndị mmadụ na-eche echiche nke iPhone si ịnye ọnụahịa
Iji maa atụ enweghi nke a doro anya ịnye ọnụahịa aghụghọ site Apple mmadụ sịrị, "ga-ha tinye ihe mmezi $ 100 ka price ezie na nke ahụ bụ $ 64.000 ajụjụ. Apple ụzọ, NEW mma na-ahapụ ndị price gbagoo site a mkpari ego. (Isi Iyi: pcadvisor.co.uk)
"The Apple Logo bụ ugbu a ọhụrụ ndò nke na-acha ọcha! Enwe. Ugbu a na-enye anyị ike gị akwụ $ 1k n'ihi na nke a "ọhụrụ" ekwentị. "Iji maa atụ ole na atụmatụ ka nọgide na-otu, ma Apple ebubo ọzọ. (Isi Iyi: disqus.com)
Na Izaghachị ịnụ ọkụ n'obi, "ka m ike na-eche," onye ọzọ kwuru na "Iji Lezienụ $ 600- $ 700 maka otu ihe ahụ?" (Isi Iyi: disqus.com)
Na ntụle na oké ọnụ price nke iPhone onye wee sị "Lee bụ ya mere Apple si iPhone bụ oké ọnụ: Ime Anwansi pixie ájá na-f *** u ike ịchọta." (Isi Iyi: disqus.com)
Jụrụ ihe mere na ha adịghị ịzụta ihe iPhone, a onye wee na, "a akara m na-eji banyere Apple maka ezi mgbe bụ," ụnyaahụ technology na echi ahịa "- eche free ka m nkebi ahịrịokwu na-aga global!" (Isi Iyi : disqus.com)
Na ntụle na oké ọnụ ịnye ọnụahịa na iPhone mmadụ sịrị, "M na-ahụ dịghị ihe mere inwe a iCrap ọzọ. M nwere ike inwe a TV na na 16GB price. "(Isi Iyi: disqus.com)
Ka na oké ọnụ ịnye ọnụahịa onye ọzọ, sị, "efu Nlụpụta: $ 150. Malite mkpọsa price: $ 750-Ish. Echere m na ha oke abụghị obosara ezu. Ọ bụrụ na ị sikwara ike njite iji nyeworo gị $ na ha, mgbe ahụ, unu kwesịrị ina dọwara anya. "(Isi Iyi: disqus.com)
> Resource> iPhone> Olee otú a ga Apple Ahịa na New iPhone?